Hlola iLeeds, eNgilandi - World Tourism Portal
Hlola iLeeds, eNgilandi
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeLeeds
Bukela ividiyo ekhuluma ngeLeeds
Ingabe idolobha eliseNtshonalanga Yorkshire, England. ILeeds inesinye sezomnotho esihluke kakhulu kunazo zonke izikhungo zokuqashwa eziphambili zase-UK futhi ibone ukwanda okukhulu kwemisebenzi yezinkampani ezizimele kunoma yiliphi idolobha lase-UK. Hlola iLeeed ebalwa njengedolobha lomhlaba wonke le-gamma yi-Globalization and World Cities Research Network. ILeeds yinhliziyo yamasiko, eyezezimali neyokuhweba yeWest Yorkshire Urban Area. ILeeds isetshenziswa amanyuvesi amane, futhi inabafundi besine ngobukhulu ezweni kanye nomnotho wesine omkhulu wamadolobha.
ILeeds yayiwukufunda okuncane ngekhulu le-13th, kwathi ngekhulu le-17th kanye ne-18th kwaba yisizinda esikhulu ekukhiqizeni nasekuhwebeni ngoboya, kuthi kwi-Industrial Revolution idolobhana elikhulu; uvolo wawuseyimboni evelele, kepha ifilakisi, ubunjiniyela, izisekelo zensimbi, ukuphrinta nezinye izimboni nakho kwakubalulekile. Ukusuka ekubeni idolobhana lezimakethe esigodini soMfula i-Aire ngekhulu le-16th, iLeeds yakhulisa futhi yamunca amadolobhana aseduze ukuze abe isikhungo samadolobha esinabantu abaningi maphakathi ne-20th century. Manje isiphakathi kweWest Yorkshire Urban Area, indawo yesine enabantu abaningi kakhulu e-United Kingdom, enabantu abayizigidi ezingama-2.6.
Namuhla, iLeeds isibe isikhungo esikhulu sezomthetho nezezimali, ngaphandle London.
Imikhakha emincane kakhulu ebunjiniyela, iyaphrinta futhi ishicilele, ukudla nesiphuzo, amakhemikhali nobuchwepheshe bezokwelapha. Eminye imikhakha esemqoka ifaka ezitolo zezokuhweba, ezokungcebeleka kanye nomnotho wezivakashi, ezokwakha kanye nezimboni zokudala nezedijithali. Idolobha libone ukusatshalaliswa okuningi, kufaka nefilimu elidala kunalo lonke elikhona, Isizinda seRoundhay Garden (I-1888), kanye nokusungulwa kwe-1767 kwamanzi anosawoti.
Amanethiwekhi okuhamba komphakathi, owezitimela nawomgwaqo esifundeni agxilwe kwiLeeds, kanti isigaba sesibili seHigh Speed ​​2 sizosixhumanisa eLondon nge-East Midlands Huband Sheffield Meadowhall. ILeeds njengamanje inesiteshi sesitimela esiphambili kunazo zonke kanye nesikhumulo sezindiza esikhulu kunazo zonke ngaphandle London.
Indawo enkulukazi yezitolo yeLeeds ikhonjwa njengesikhungo esikhulu sokuthenga saso sonke isifunda sase-Yorkshire nesifunda saseHumber esinabantu abaningi abayizigidi ezingama-5.5 abanikela ngemali esetshenziselwa u- $ 1.93 billion ngonyaka.
Kunezindawo eziningi zokuthenga ngaphakathi enkabeni yedolobha. Sekukonke kunezitolo ezingaphezu kwe-1,000 zokuthengisa, ezinendawo ehlanganisiwe ye-340,000 m2, eLeeds City Center.
Isikhungo sedolobha sinendawo enkulu yabahamba ngezinyawo. IBriggate iyindawo enkulu yokuthenga lapho umuntu angathola khona izitolo eziningi ezaziwa ngokuthi iBritish High Street. Izinkampani eziningi zinezitolo eziningana ngaphakathi kweCentral Leeds nedolobha elibanzi. IVictoria Quarter iyaphawuleka kubathengisi bayo abaphethe izinto ezisezingeni eliphezulu kanye nobuciko obuhle bokuklama.
Endaweni yaseChurwell eLeeds kukhona iWhite Rose Shopping Center. Lesi sikhungo sinezitolo eziphakeme zomgwaqo eziphezulu ze-100 eziboshwe ngabakwaDebenhams, Marks & Spencer, Primark kanye neSainbury's. Ezinye izitolo zinobukhona bazo bodwa beLeeds lapha futhi azithengisi eCentral Leeds, njengesitolo seDisney kanye ne-Build-A-Bear. Kunezindawo zokuthenga ezengeziwe ezitholakala emadolobhaneni amaningi aba yingxenye yedolobha lesifunda kanye nasemadolobheni afakwa eDolobheni Lezakhiwo e1974.
Izimpawu zikhombisa izinhlobo zemvelo ezahlukahlukene nezakhiwe. Izindawo zokuphatha leli dolobha eziseRoundhay naseThempeli Newsam sekuphele isikhathi eside ziphethwe futhi zigcinwa ngumkhandlu ukuze kusizakale abakhokhi bentela futhi phakathi kwezindawo ezivulekile enkabeni yeLeeds kukhona iMillenium Square, iCity Square, iPark Square kanye neVictoria Gardens. Lesi yindawo yokugcina yesikhumbuzo sedolobha eliphakathi nendawo: kukhona ezinye izikhumbuzo zezimpi ze42 ezindaweni ezingaphansi kwedolobha, amadolobhana kanye namadolobhana esifundeni.
Indawo eyakhelwe kuyo ihlanganisa ukwakhiwa kokuziqhenya komphakathi njengeMorley Town Hall kanye nengxenye yezakhiwo eziseLeeds, eLeeds Town Hall, eCorn Exchange naseLeeds City Museum. Lezi zakhiwo ezimbili ezimhlophe ezisendaweni yesibhakabhaka yaseLeeds ziyisakhiwo seParkinson seLeeds University neCityic Hall, esinezikhova zegolide ezihlobisa iziqeshana zamawele akhe.
ILeeds inamapaki amaningi amakhulu nezikhala ezivulekile. IRoundhay Park iyipaki elikhulu kunazo zonke kuleli dolobha, futhi ingenye yamapaki amadolobha amakhulu eYurophu. Ipaki ine-2.8 km engaphezulu kwamakhilomitha2 wepakiland, amachibi, izinkuni nezingadi okungezeseLeeed City Council. Amanye amapaki akuleli dolobha ahlanganisa: Beckett Park, Bramley Fall Park, Cross Flatts Park, East End Park, Golden Acre Park, Gotts Park, izingadi kanye nezinkundla zeHarewood House, Horforth Hall Park, Meanwood Park, Middleton Park, Potternewton Park, IPudsey Park, iThempeli Newsam, iWestern Flatts Park neWoodhouse Moor. Kunamapaki amaningi amancane nezikhala ezivulekile ezisakazeke edolobheni, okwenza iLeeds ingelinye lamadolobha aluhlaza e-United Kingdom.
ILeeds ineminyuziyamu engaphezulu kwe-16 nemipheme kubandakanya i-9 esebenza umkhandlu.
ILeeds iyisisekelo sePremier Flag ukukhombisa ubusuku bokuzijabulisa, obahlukahlukene, obuphephile nobumnandi.
ILeeds inabafundi besine ngobukhulu ezweni (ngaphezu kwe-200,000), futhi ngenxa yalokho ingenye yezindawo ezishisayo zase-UK zokuphila ebusuku. Kunenqwaba yama-pubs, imigoqo, amakilabhu asebusuku kanye nezindawo zokudlela, kanye nezindawo eziningi zomculo obukhoma. Uhla oluphelele lokuthandwa komculo lubhekelwe eLeeds.
ILeeds inesigameko sasebusuku esakhiwe kahle se-LGBT +, ikakhulukazi esendaweni ye-Freedom Quarter eLower Briggate. IPenny entsha ingenye yezindawo ezinde kunazo zonke ezise-UK ezisebenzisa izindawo ze-LGBT +, kanye ne-Leeds endala yezitabane.
Izindawo ezidumile zokuphila ebusuku eLeeds zifaka i-Call Lane, iBriggate ne-Arena Quarter. ITowards Millenium Square yisifunda esikhulayo sokuzijabulisa esihlinzekela abafundi kanye nezivakashi zangempelasonto.
I-Yorkshire inomlando omuhle we-ale real, kepha imigoqo eminingana eseduze kwesiteshi sesitimela ihlasela ubhiya bendabuko ngendawo yesimanje. Amabha athandwayo afana nalokhu afaka i-The Hop, The Keys Cross and The Brewery Tap. ILeeds ibuye ibe nomcimbi waminyaka yonke weLeeds International Beer Festival, obanjelwa eLeeds Town Hall njalo ngoSepthemba.